Global Aawaj | कस्ता रोगीलाई मासु हानिकारक हुन्छ ? कस्ता रोगीलाई मासु हानिकारक हुन्छ ?
८ कार्तिक २०७८ 10:59 am
दशैँ भर्खरै सकिएको छ । दशैँमा र दशैँ पछिका चाडमा धेरैको अत्याधिक मासु खाने बानी हुन्छ ।मासुसँगै चिल्लो, नुन, चिसो पेय पदार्थ, गुलियो र मदिराको पनि बढी प्रयोग गर्ने प्रचलन नै बनेको छ । तर, कतिपय रोगीलाई भने यस्ता खाद्यपदार्थ विष बन्न सक्छ ।